TAMISASAA ODUU BBC AFAAN OROMO, AUG 16, 2018 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooTAMISASAA ODUU BBC AFAAN OROMO, AUG 16, 2018
“Karoora Liyyuu poolisii naannoo Somaalee hiikkachiisuu hin qabnu” – Ministeera Ittisa Biyyaa
Hagayya 15, 2018 (BBC) — Mootummaan federaalaa karoora Liyyuu Poolisii hidhannoo hiikkachiisuu hin qabu jechuun daarektarri olaanaa sab-qunnamtiifi indooktirineeshinii raayyaa ittisa biyyaa meejar jeneraal Mohaammad Tasammaa BBC’tti himan.
”Humni nageenyaa Federaalaa kaaayyoo humna addaa naannoo Somaalee hiikkachiisuu qabatee hin sochoone. Durumaanuu humni addaa akka leenji’uuf akka hidhatu kan godhe mootummaaa federaalaati” jedhan meejar jeneraal Mohaammad.
Kana malees, humni addaa kun leenji’eefi hidhatee mootummaa naannichaa wajjin hojii hojjechaa turuufi ammas hojjechaa akka jiru himan.
”Ammaan kana humni addaa qaama nageenya kabachiisuu tahee akka hojjetu taasifamaa jira malee, karoorri hidhannoo hiikkachiisuu hin jiru” jedhaniiru.
”Haadha warraafi ilmoo kiyya na biratti ajjeesani”
Falmitoonni mirga namoomaa hundeeffamni Liyyuu Poolisii bu’uura seeraa hin qabu jedhanii qeequ.
Meejar jeneraal Mohaammad garuu naannolee Itoophiyaa hunda keessatti gurmiin humna addaa akka jiru eeraniiru.
”Poolisii idilee, humna addaafi milishaatu jira. Naannoo Somaalettis akkuma naannolee biroo mootummaan humna addaa leenjisee bobbaasuun humna nageenyaa federaalaa wajjin hojjechaa tureera” jedhu.
Meeshaan Liyyuu Poolisiin hidhate kan naannoo warra kaanirra ammayyaawaafi jabaadha komiin jedhus jira.
Naannoo Somaaleetti rakkoon nageenyaa jabaa waan tureef isa furuuf jecha humna nageenyaa federaalaa wajjiin tahuun hojiin poolisii addaa jabeessuufi qopheessuu hojjatamuusaa dubbataniiru.
”Gama kanaanis rakkoo nageenyaa furuun danda’ameera” jedhu.
“Wanti sirreeffamuu qabu kallattii mootummaan kaahuun kan raawwatamu taha. Yeroosaatti garuu barbaachisaa gatii taheef raawwatame” jedhaniiru.
‘Rakkoo daangaa Oromiyaafi Somaaleen waggaatti namoonni 700 ol ajjeefaman’
Naannoo Somaaleetti Liyyuu Poolisiin sarbama mirgootii namoomaa akka raawwatu falmattooti mirga namoomaafi jiraattonni daangaa naannoo Somaaleefi Oromiyaa yeroo gara garaa himaniiru.
Meejar jeneraal Mohaammad lakkoofsa miseensaafi gurmii Liyyuu Poolisii irratti yaada kennuu irraa of qusataniiru.
ODUU BBC AFAAN OROMO news; Which way for Ethiopia?
ODUU BBC AFAAN OROMO news May 3, 2021 Which way for Ethiopia? Abiy cracks down…
Dhaamsa fi ijibbaata namoota muraasa KFO keessaaf!
Oromoon daarii amma daariitti kaayyoon keessan baay’ee waan walitti dhiyaatuuf ABO waliin tokko ta’aa jedhee isiniif dhaamaa ture, jiras. Haa ta’u malee akka odeeffannoo ba’aa jiruutti kan duubatti harkifataa jiru KFO akka ta’etti.Kunis akka raga achi keessaa ba’aa jirtuutti yoo ta’e sababa namoota dhuunfaati malee sababa dhaabaa akka hin taanetti. Kunis sababa namni dhuunfaan miseensa KFO ykn hoji geggeessaa ta’e tokko jibbiinsa ABO irraa ykn nama miseensa ABO ta’e irraa qabaniif jedhameera.Haa ta’u malee namni kamuu ilaalcha mataa isaa qabaachuu danda’a. Garuu yaadnii fi jibbiinsi nama dhuunfaa sun guutummaaatti KFO,ABO irraa ykn ABO ,KFO irraa dhiibuu hin danda’u,sababni isaas namani kun ga’ee guddaa dhaaba kana keessatti yoo qabaate iyyuu nama dhuunfaadha,KFOn garuu kan uummata ballaati.Sababa fedha nama tokkoof fedhiin uummata ballaa rarra’uu hin qabu.
Dhaamsaan nama kanaaf qabu:-
Akka dhuunfaatti saba kanaaf baay’ee dadhabde ta’uu dandeessaa.wanti guddaan immoo eegaluu miti xumuruudha malee.Jibbiinsa nama dhuunfaaf ykn garee tokkoof waan uummatni barbaadu gara ofii barbaadde qofaatti yoo dhiibde seenaan si gaafata. ABO keessa taa’ee namni wanta Oromoo hundaaf hin taane hojjetu yoo jiraate itti dhiyaattee fuulaa fuulatti dubbattee sababi isaa ga’aa yoo ta’e namni sun waan hin jijjiramneef qaba jedhee hin yaadu. Walitti dhiyaannee yoo rakkinni jiraate wal sirreessuutu Oromoof furmata ta’a malee waldhiibuun,waan kaleessaa wal irra barbaaduun furmaata nuun taatu. Garaa dhiifamaa waliin haa qabaannu. Dhuguma sila iyyuu uummata kanaaf qabsoofna taanaan utuu namni nu waraanee iyyuu nutti hin dhaaga’amu,kanaaf immoo fakkeenyi Bakar waareedha. Akkanaan itti fufnaan jaalalli nuti nama biratti qabaataa turres cilee dibatti. Walumaa gala immoo jaallatamanii jibbamuu waaqni nu haa baraaru.Qabsoo uummataa karaatti hambisuunis hin taatu.wal malee kan biraa hin qabnu. Yoo nuti tokko taane,diinni keenya hunduu firaa nuuf ta’a,yoo nuti waldhiibne fi wal gaarreffanne immoo hunduu diina nutti ta’a. Mana ormaa ammaan bareechitee ijaartu illee, godoonuma keetti galta.Ormi amman sooromu illee iyyeessaa obboleessa keetii siif wayya.ormi ammam ogummaan dubbatu illee gowwaa obboleessa keetii siif wayyaa maaliif barsiifachuu ni dandeessaa. Qabsoo uummataa baatanii bara fakkaachuun hin taatu.
Kanaaf ammas si eegaa jirra!!!!!Kana booda garuu dubbii bareechanii Oromoo goyyoomsuun hin jiru, qeerroon ittoo ati itti nyaattee bultee fi ciree ati ganama nyaatte bifa isaa sitti himuu ni danda’a.Barri dhokatanii walmiidhan darbeera.
Isin warri BBC/Afaan Oromowarra KFO keessaa nama dhiyeessitanii maaltu akka uummanni jedhutti akka isaan ABO wajjin walii hin gallee isaan godhe nuuf gaafadha.Hubadhaa,oromoon kan inni jedhaa jiru waa’ee waliin hojjechuu isaan jedhaa jiran kana miti ,dubbiin tokko ta’aadha!galatoomaa isin eegganna adaraa sabaa hin nyaatinaa.